Ulefone Gemini nyere iwu | Gam akporosis
Ulefone Gemini nyere iwu
Anyị na-e-ekwu okwu banyere Ulefone Gemini, ọnụahịa ọhụrụ sitere n'aka onye nrụpụta Asia na nke ahụ pụtara maka ahụ ya nke ejiri ihe ndị dị mma n'agbanyeghị ọnụ ahịa ya. Ugbu a, mgbe ogologo ichere, emechara ka ekpughere eze na emeputa website.
N'ime izu ndị gara aga, nnukwu data sitere na ekwentị a abanyela, ọ bụ ezie na ugbu a, anyị nwere ike ikwenye ihe niile njirimara teknụzụ nke Ulefone Gemini, ụdị decaffeinated nke ụdị Pro mana nke ahụ rutere stomping.
1 Ulefone Gemini kwụpụtara maka ogo ya mechara
2 Ya sọrọ igwefoto usoro ga-atọ ụtọ foto ndị hụrụ
2.1 Ulefone Gemini Image osisi
Ulefone Gemini kwụpụtara maka ogo ya mechara
Ihe mbu nke puru iche banyere smartphone a bu njedebe ya. Ma ọ bụ na Ulefone Gemini nwere a unibody ahu mere nke magnesium na aluminum alloyma ọ bụ, na mgbakwunye na nke metal okpokolo agba na a leghaara anya imecha na-enye ọnụ a n'ezie adịchaghị anya.
Banyere njirimara teknụzụ, ụdị Gemini nwere ihuenyo nke otu panel mebere 5.5 nke anụ ọhịa IPS nke ahụ nwere mkpebi 1080p. Ihe nhazi gị MediaTek MTK6737T quad-isi na 1.5 GHz elekere ọsọ yana 3 GB ụdị LPDDR3 nke ndị ọnụ ya nwere nkwa ịrụ ọrụ karịa nke ga-ezuru iji nwee ike ịmegharị egwuregwu ọ bụla n'enweghị nsogbu.
A ga-atụkwasịkwara nke a Ntọala nchekwa 32 GB nke ekwentị nwere, nke enwere ike ịgbasa site na oghere kaadi micro SD ya. Rịba ama na Ulefone Gemini ga-abịa gam akporo 6.0 na emeputa onwe ya kwere nkwa na ọnụ aga akwalite ya na Nougat, ihe kachasị ọhụrụ nke sistemụ arụmọrụ Google, n'ime ọnwa ole na ole sochirinụ.
Ihe ọzọ na-adọrọ mmasị na-abịa na eziokwu ahụ bụ na ọnụ nwere onye akara mkpisiaka dị na azụ nke ama. Anyị enweghị ike ichefu banyere ya batrị nke 3250mAh, karịa iji kwado akụrụngwa niile nke ngwaọrụ a n'enweghị nsogbu.
Ya sọrọ igwefoto usoro ga-atọ ụtọ foto ndị hụrụ
Na foto ngalaba bụ ebe anyị na-enweta ihe ijuanya nke abụọ. Ọfọn, anyị amarala nke ọma ogologo oge na Ulefone Gemini ga-enwe sistemụ igwefoto abụọ, ma anyị amatalarị otu asịrị na-adị mgbe ụfọdụ ...
Ihe bụ na e mepụtara usoro igwefoto abụọ nke Ulefone Gemini. N'ụzọ dị otú a ekwentị ga-igwefoto guzobere site a 13 megapixel oghere na nke abụọ 5 megapixel lens. Igwefoto ikpeazụ a bụ ọrụ maka ịkọ omimi nke foto ahụ, na-enye ohere ịmepụta mmetụta bokeh nke yiri nke igwefoto igwefoto. N'ikpeazụ, igwefoto ya n'ihu 8-megapixel ga-atọ ndị hụrụ selfies ụtọ.
Ulefone Gemini ga-ada ahịa ahụ na nsụgharị atọ: oji, ọlaọcha na ọla edo Na, ọ bụ ezie na anyị amaghị ọnụahịa ya, enwere m ike ịgbakọ na ọ ga-efu n'etiti euro 150 na 200. N'ezie, onye nrụpụta emeela ngosi na nnukwu ụzọ ebe ọ bụ na, na ịpị ebe a, i nwere ike tinye sere maka Ulefone Gemini. Na, ọ bụrụ na ị merie, egbula oge ịdenye aha na akwụkwọ akụkọ ha iji nweta akwụkwọ nkwado ruru $ 70.
Ulefone Gemini Image osisi
Pathzọ zuru ezu na edemede: Gam akporosis » Ngwa gam akporo » Mobiles » Ulefone » Ulefone Gemini nyere iwu
Indicate na-egosi n'isiokwu ahụ na ọ na-ebu 6737-isi MTK8T, mana nke a abụghị ihe nhazi a quad core?
Obinna Iwuagwu dijo
Ọ bụ na nhazi ahụ ị na-egosi quad core kama octa core?
Zaghachi Diego Saez
Ndudue m, ọ gbazigharịrị, daalụ nke ukwuu!
Olu na-ekwupụta onye na-akpọ gị, ọ na-eme gị?
Etu esi edozi mmechi nke Instagram ma ọ bụrụ na ị na-ata ahụhụ ya na awa ikpeazụ